Sary : Fédération Malagasy de Kung-Fu Wisa
01 aogositra 1985 - 01 aogositra 2021, feno 36 taona katroka androany ny nanafihana sy nandravana tamin’ny basy marovava sy fiara mifono vy ny foiben’ny Kung Fu sady toeram-ponenan’i Grand Maitre Pierre Mizael na Pierre Be teo Ambatomainty Boriborintany fahadimy Antananarivo. Nandriaka ny rà tamin’izay andro izay, maro ireo namoy ny ainy, ao ireo mitondra takaitra mandraka ankehitriny. Rakotoarijaona Pierre Mizael no tena anarany fa Pierre Be hoy ny sasany. Teraka ny 06 aprily 1949 tao Ambohibary Sambaina Antsirabe izy, ary nanjavona io 01 Aogositra 1985 nanafihana ny fonenany tao Ambatomainty Antananarivo io.
Tontosa ny 30 jolay 2021 tao amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe ny lanonana ara-miaramila Fandresena 2021 namoahana manamboninahitra miisa 69 mianadahy. Mitondra ny anarana “Général de Corps d'Armée Ismaël Mounibou" ity andiany mivantana faha 42 ity. Miisa 62 kosa ireo hisantatra ny fiofanana ho manamboninahitra izay handrafitra ny andiany faha-44 izay misalotra ny anarana "Amiral Ratsiraka Didier Ignace". Tonga nanome voninahitra izany lanonana izany tao amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe ny Filoham-pirenena sady Filoha Faratampon’ny Foloalindahy. Niarahaba manokana ireto manamboninahitra avy amin'ny andiany faha 42 izay nahavita ny fianarany ireto, ny Filoha Andry Rajoelina. Ity no fisehoana ampahibemaso voalohany ny filoham-pirenena taorian’ny nivoahan’ny raharaha fifoana ny ainy roa herinandro lasa izay.
Lehilahy iray, izay voarohirohy tamin'ny tranga fakana an-keriny ny 03 may 2021 no naterin’ny Fokonolona an-jatony, niaraka tamin'ny miaramila DAS avy ao amin'ny fokontany Ambohimiarina, tao amin’ny Tobin-janaparitra Betatao ny 27 jolay 2021 vao mangiran-dratsy. Tsy niala tao Betatao ireo Fokonolona ireo fa niandry tany an-toerana na dia efa voaray tao amin'ny tobin-jandary aza ilay lehilahy. Niahiahy ny mety hisiana fitsaram-bahoaka ny lehiben'ny Toby ka dia nitondra niala ny tanàna io lehilahy hamonjy an'Anjozorobe vao mangiran-dratsy, mba haterina any amin'ny sampan-draharaha misahana ny heloka bevava ao Fiadanana Antananarivo, izay misahana ny famotorana. Nony teny an-dalana sahabo ho 05km niala ny tanàn'i Betatao anefa dia nisy andian'olona maro nanao fisavana mpandeha, ary rehefa nahita azy ireo ilay lehilahy haterina dia nirifatra nandositra ka nifanenjehin'ireo andian'olona maro nanao fisavana.
Sary : Faritra Androy
Natomboka androany tao Ambovombe, renivohitry ny Faritra Androy, ny fizarana tambin-karama 9 volana an'ireo filoham-pokontany sy lefiny miisa 926 ao anatin'ny Kaominina 8 manodidina an'Ambovombe. Hitohy hanerana ny Faritra Androy manontolo izany. Nisy ihany ny fanomezana vary 10kg isam-pokontany ho fiahiana ireo sefom-pokontany ireo. Fiaraha-miasa teo amin'ny Goverinoran'ny Faritra Androy, Dr Soja Lahimaro sy ny kestiora voalohany ao amin'ny Antenimieram-pirenena sady solombavam-bahoaka voafidy tao Ambovombe, Henri Jean Michel no nahazoana izao vokatra izao. (Jereo Sary Tohiny)
Nanolotra fitaovana ho an'ny Zandarimariam-pirenena malagasy ny firenena frantsay. Notanterahina teny amin'ny Toby Jeneraly Richard Ratsimandrava, ny talata 27 jolay 2021, ny fanolorana izany. Mitentim-bidy 90 000 000 Ariary ireo fitaovana, izay ho enti-miasa eo amin'ny sehatry ny famotorana amin'ny heloka bevava sy fitaovana fifandraisan-davitra. Mamaly tokoa amin'ny filàn'ny Zandarimaria ankehitriny ireo fitaovana azo. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny Jeneraly Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria sy ny Mpanolotsaina ny Masoivoho frantsay, izay notronin'ny Jeneraly Komandin'ny Zandarimariam-pirenena sy ireo Tompon'andraikitra ambony maro eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.
Miantso vonjy amin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny praiminisitra Ntsay Christian ireo mpiasa “de droit privé” ao amin’ny ivontoeram-pirenena misahana ny antontanisa (INSTAT). Mitalaho ny mba hijerena haingana ny mikasika azy ireo manokana izy ireo. Nisy ny taratasy fangatahana fampidirana ireo mpiasa tranainy izay efa amam-polo taona niasana farafahakeliny ho mpiasam-panjakana raikitra. Nolazain’ny mpitantana eny anivon’ny INSTAT sy ny minisitera mpiahy misahana ny toekarena sy ny tetibola (MEF) fa efa eny anivon’ny fiadidiana ny praiminisitra ny fanapahana mikasika izany. Taitra sy sanganehana anefa ireo mpiasa voakasika ireo raha nahare tamin’ny filazam-baovao fa efa mandeha avokoa ny eny amin’ny ministera hafa.
Olona roa no nentin’ireo dahalo nataon’izy ireo takalonaina, ny faran’ny herinandro teo, tao amin’ny toby fitrandrahana volamena any amin’ny Fokontany Beankana, 96km dia an-tongotra miala ny renivohitry ny Kaominina Andriba, Distrika Maevatanana. Nitaky vola 12 tapitrisa Ariary ireo mpaka ankeriny ho tambin’ny famotsorana azy ireo. Telo mianaka ihany koa no nalaina ankeriny vao mangirandratsin’ny 17 jolay tao Andranotafika Kaominina Ankilizato, Distrikan’i Mahabo ka nataon’ny dahalo takalonaina. Lehilahy 56 taona ny iray, zaza mianadahy 6 taona sy 11 taona ny roa. Enin-dahy ireo naka ankeriny azy ireo, ary nitondra basim-borona ny efatra.Nitaky 8 tapitrisa Ariary ireo mpaka ankeriny ho tambin’ny famotsorana azy ireo. Efa navotsotr’ireo olon-dratsy ny roa tamin’izy telo takalonaina ireo.
Dahalo telo no lavo nandritra ny hetsika fampandriana fahalemana nataon’ny Zandary tao amin’ny Kaominina Etrotroka, Distrikan’i Farafangana ny 17 jolay 2021 teo. Dahalo raindahiny voatonona hatrany amin’ny halatr’omby sy fanafihan-jiolahy nampihorohoro ny vahoaka tao amin’ny Kaominina Etrotroka izy telo maty ireto. Ny iray tamin’ireo dia voalaza fa tompon’antoka tamin’ny famonoana ny “Chef de Poste” ny Zandary tao Etrotroka tamin’ny oktobra 2020. Tafakatra efatra izao ireo dahalo lavo tato anatin’ity hetsika nanomboka ny 13 jolay 2021 ity.
Lehilahy iray no nisy naka an-keriny ny tolakandron’ny 14 jolay 2021. Avy nandevina ny namany izy tamin’io andro io no nisy dahalo telo lahy, nirongo zava-maranitra sy langilangy no naka azy an-keriny tao Andohavorondreo, Kaominina ambonivohitra Ambatofinandrahana. Roso tamin’ny fikarohana avy hatrany ny Zandary sy ny « Lambamena » andrimasompokonolona, raha vao nahazo fampandrenesana. Natao avy hatrany ny sakana tamin’ireo kizo samihafa.
Lehilahy roa no tra-tehaky ny Zandary avy ao amin’ny Kaompania Mahajanga, nitondra vato kristaly milanja 450kg notsinjaraina tao anaty gony miisa 5. Tao Mahajanga Be, ao an-drenivohitry ny Faritra Boeny no nahatrarana azy ireo. Tsy nisy taratasy fahazoan-dalana ny vato ka nogiazana avy hatrany, ary notanana nanaovana famotorana ireo olona roa nitondra azy. (Jereo Sary Tohiny)